Ake Ujabulele Isevisi Yokushisa Egcwele Ye-Turnkey One-stop Professional Agriculture Greenhouse.
I-Shengqiang Greenhouse Ikuvumela ukuthi ujabulele isevisi egcwele ye-Turnkey eyodwa-stop professional
Umhlinzeki we-greenhouse wezolimo ochwepheshe onolwazi lweminyaka eyi-18+.
Isibonisi seGreenhouse Ezolimo
IGreenhouse Farming inqubo yokutshala izitshalo nemifino endaweni ebamba ukushisa ecosystem. Abakhiqizi be-greenhouse ezolimo be-Shengqiang bazokunikeza i-greenhouse yefilimu yepulasitiki ehamba phambili, i-glass greenhouse, i-polycarbonate sheet greenhouse, kanye nezinsiza ezibamba ukushisa.
Ezolimo ze-multi-span glass greenhouse zokutshala/umbukiso/ukubona indawo
Ithende le-Glass greenhouse likhulisa itende lithatha uhlaka lwensimbi eshisayo, into evalayo evame ukusetshenziswa ingilazi entantayo yekhwalithi ephezulu engu-4-5mm noma ingilazi eshisayo, ucwebezela oluphindwe kabili:4+6+4mm,5+6+5mm. Ukudlulisa ukukhanya kungaphezu kuka-90%, kodwa futhi ungakhetha okokumboza ngokwezidingo zekhasimende, phezulu kwe-greenhouse futhi uzungezwe ingilazi egxilile ye-aluminium ekhethekile.Isakhiwo Nokumisa1.Uhlaka lwamathambo enziwe ngamashubhu ensimbi angunxande agoqelwe ngamakhaza, anezinhlangothi ezimbili ezishisayo.2.I-greenhouse ingahlanganiswa ngohlelo oluthile oludingekayo, njengokuthi, ngaphakathi&ngaphandle uhlelo shading, ohlangothini&uhlelo lokungenisa umoya ophahleni, ukufudumeza&amasistimu wokupholisa, njll.3.Izinto zokumboza zihlanganisa izinhlobo ezimbili zengilazi engenalutho.Izincazelo ziyi-4mm+9mm+4mm kanye ne-5mm+6mm+5mm.4.Lolu hlobo lwe-greenhouse lungakwazi ukulawula okuhlakaniphile nokuzenzakalelayo ngokugcwele, okusetshenziselwa ukutshala izimbali nemifino, indawo yokushisa yocwaningo lwesayensi, ihhotela lendawo yokudlela, imakethe yezimbali, umbukiso wendawo kanye nokuzalaniswa kwezithombo.
I-greenhouse yefilimu yepulasitiki yobungcweti yokutshalwa kwemifino ephikisana nesizini
I-multi-span plastic film greenhouse isetshenziswa kabanzi ekutshaleni utamatisi, imifino, izithelo nezimbali. Ingahlinzeka ngezimo zokukhanya okufanele, umswakama kanye nezinga lokushisa, ukuphakamisa okukhiphayo nokumelana nezinhlekelele zemvelo. Ingaletha phambili noma ihlehlise ukunikezwa, ikhiphe ukuphikisana kokuhlinzekwa kanye nesidingo.
Best amanani customizable esobala plastic greenhouse
Izikhala eziningi ze-arch greenhouse zingamamitha ayi-8 ububanzi. Isakhiwo sawo esikhulu amapayipi ashisayo afaka amapayipi kanye nephrofayili. Phezulu nokuzungezile ifilimu ye-PO ekhethekile ye-greenhouse ene-span multi-span noma ibhodi le-PC elingu-8mm ububanzi. Ukudluliswa kwayo kanye ne-insulation kuphelele kakhulu. Eceleni kwayo kumiswa uhlelo lwe-shading yangaphandle nengaphakathi, kanye nesistimu yokupholisa abalandeli ephoqelekile, isistimu yokukhipha amanzi, uhlelo lokuqoqa amazolo, amabhentshi aginqikayo kanye nesistimu yokulawula i-electronic. Uhlelo lokulawula lwalolu hlobo lwe-greenhouse luyi-centralized electric hand control.I-arch greenhouse ingasetshenziselwa ukutshalwa kwezimbali nemifino, futhi ingasetshenziswa njengendawo yokushisa yasemanzini yembali, imifino kanye nesihlahla. Njenge-greenhouse yokuhlobisa, ingasetshenziswa njengendawo yokudlela yemvelo, umbukiso, ezokuvakasha kanye nocwaningo lwesayensi, kanye nesiko lezilwane zasemanzini nemfuyo.
Izindlu zokugcina izithombo zemifino ezishibhile ezine-span eyodwa ziyathengiswa
Chinese Agricultural Culture Poly Tunnel Greenhouses Single-Span GreenhousesI-Single span plastic tunnel greenhouse yakhiwa ipayipi elinothayela elishisayo elinezingqimba ezintathu zefilimu lesembozo. Isakhiwo sefreyimu silula, izindleko ezishibhile futhi kulula ukuzifaka.
I-Qingzhou Shengqiang Greenhouse Technology Engineering Co.Ltd. ibambelela kufilosofi yebhizinisi ethi "Ikhwalithi YokuQala, Ikhasimende Kuqala". Lo mhlangano uhlanganisa indawo engamamitha-skwele angu-40000, kanye nesipiliyoni seminyaka engaphezu kwe-18 ekwakheni indawo ebamba ukushisa, okuhlanganisa nokuklanywa kwe-greenhouse nocwaningo, ukukhiqizwa nokucutshungulwa, ukufakwa.
Imikhiqizo eyinhloko: I-Polycarbonate sheet greenhouse, i-glass greenhouse, i-multi span film greenhouse, i-flower greenhouse, i-hydroponic cultivation greenhouse, i-greenhouse yokulima imfuyo, i-greenhouse yezolimo, i-greenhouse yokuhweba, i-seeding greenhouse, i-single span film greenhouse, i-greenhouse engadini yomndeni, i-greenhouse system enezesekeli.
Agricultural Greenhouse Multi-Span Film Greenhouses Projects Projects in Kuwait
Agricultural Greenhouse Multi-Span Film Greenhouses Projects Projects in KuwaitAbakhiqizi be-greenhouse base-China : Siyabonga ngokwethemba kwamakhasimende ethu. Saqala ukwakha i-glasshouse greenhouse e-Kuwait. Ungathola high quality zokugcina izithombo ngentengo yokuncintisana
1. Ifektri yethu ye-greenhouse yezentengiselwano ibilokhu yenza ukukhiqizwa kwe-greenhouse iminyaka engaphezu kwe-10, inomsebenzi omningi wokukhiqiza nokwakha kanye nobuchwepheshe.
2. Ifekthri yethu ye-greenhouse green ine-design yephrojekthi, amakhono okwakha kanye nokuphatha iphrojekthi, ukuze inikeze amakhasimende ulwazi olungcono lokuthenga.
3. Imboni yethu ngokwezidingo zamakhasimende iklama uhlelo oluhle kakhulu, esimisweni sekhwalithi ephezulu ukuze amakhasimende onge izindleko futhi andise ukusebenza kahle kwamakhasimende.
4. Ifektri yethu ye-greenhouse yokuhweba inikeza iwaranti yonyaka owodwa. Ngemuva kwesikhathi sewaranti, sisazoba yintengo enengqondo kakhulu yokuhlinzeka ngokushintshwa kwezesekeli ze-greenhouse.
Xhumana nathi Thola Idizayini Yamahhala
Ukuze uthole eminye imibuzo ehlobene ne-greenhouse yezolimo kanye nemikhiqizo yezohwebo, wamukelekile ukusibuza.